ဗီဇာကတ်များ ပြည်တွင်း၌ စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြင်ဆင် ~ ရွှေမန်းသားလေး ဝေယံ
ဆော့ဝဲလ်များ၊နည်းပညာများ၊ဗဟုသုတများ၊ရသစာပေများ၊တရားတော်များ၊ သတင်းများ၊ဗေဒင် စသည်တို့ စုံလင်စွာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ မီဒီယာဥယျာဉ်လေးတစ်ခု........
Shwe Man Tar Lay's Poems
Kind Rose's Poems
ခေတ္တရာသူ ၏ ကဗျာများ
Member ၀င်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ...!!!
ဗီဇာကတ်များ ပြည်တွင်း၌ စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်
8/29/2012 09:26:00 PM Wai Yan Linn No comments
ဗီဇာကတ်များ ပြည်တွင်း၌ စတင်အသုံးပြု လာနိုင်ရန်အတွက် အီလက်ထရောနစ် ငွေပေးချေမှုစနစ်အား မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခြင်းတို့ဖြင့် စတင်ပြင်ဆင် လျက်ရှိကြောင်း Visa မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ဗီဇာကတ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို ရန်ကုန်မြို့၌ သြဂုတ်လ အတွင်းက ကျင်းပခဲ့ပြီး ထိုကဲ့သို့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများအား မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံတကာ ငွေပေးချေမှု ကတ်ပြားများ လက်ခံခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်းတို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သြဂုတ်လ ၁၇ ရက် ရက်စွဲဖြင့် Visa က ထုတ်ပြန်ထားသော သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် ခရီးသွား ဧည့်သည်များအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းမှာ ဗီဇာ၏ ပထမ ဦးဆုံးသော အစီအစဉ် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် လက်ခံကျင်းပမည့် အရှေ့တောင် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲနှင့် ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် စသည်တို့တွင် ဗီဇာကတ်များ စတင် အသုံးပြုနိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ်လုပ်ငန်း အသိုင်းအဝိုင်းမှ သိရသည်။ ဗီဇာကတ်မှာ စားသုံးသူများ အတွက် ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ကြိုတင် ပေးအပ်ထားသည့် ငွေကြေးနှင့် လက်ငင်း ပေးချေခြင်း၊ နောက်မှ ပေးချေခြင်း စသည်ဖြင့် ရွေးချယ်မှု များစွာကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗီဇာကတ် အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် လေ့လာနိုင်ကြောင်း Visa မှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာမှာ www.corporate.visa.com ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted in: လေ့လာစရာ Website ကောင်းများ
သူငယ်ချင်း... ဒီပို့စ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ အမြင်လေးကို ဖော်ပြပေးပါဦး။သူငယ်ချင်းရဲ့ comment တစ်ခုဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။ဒါကြောင့် အမှတ်တရ စကားလေးတွေ ပြောပြီး အကြံဥာဏ် လေးတွေ ပေးခဲ့ပါဦးဗျာ။
သူငယ်ချင်း... မှတ်ချက်ပေးလိုပါက အကွက်ထဲ ရေးချင်တာ ရေးပြီး အရင်ဆုံး
WORD VERIFICATION မှ ကုဒ်နံပတ်များကို မှန်ကန်စွာ ရိုက်ထည့်ပါ။
Google အကွက်လေးကို နှိပ်ပါ။ Name/URL ရွေးနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Name မိမိနာမည်
URL နေရာလေးတွင် မိမိရဲ့ဆိုက်လိပ်စာ ဒါမှမဟုတ် (အီးမေး)ရေးပြီး Publish Your
Comment နေရာလေးကို နှိပ်ပါ။
စာဖတ်သူများ ရေးသားလာသော မှတ်ချက်များကို စီစစ်၍သာ လက်ခံ ဖော်ပြပေး
နေပါ၍ စာဖတ်သူများ ပေးလာသော မှတ်ချက် များကို ချက်ချင်းမြင်ရမည်
ထို့ကြောင့် အတည်ပြုပြီးကြောင်းကိုတော့ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်လာရောက်ကြည့်ရှုဖို့တော့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်။
လာရောက်ဖတ်ရှုတဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ကို ခင်မင်လေးစားလျက်.......
Android သမားများအတွက် shwemantarlay V2.0 apk လေးပါ။ အောက်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ...
Feedburner activate လုပ်နည်း
Email လိပ်စာထည့်ပြီးလျှင် Submit ကိုနှိပ်ပါ.
ပေးထားသည့် codeနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Complete subscription Request ကို နှိပ်ပါ.
Feedburner မှ သင့်ထံမေးလ်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်.
အဆိုပါမေးလ်ကိုဖွင့်ပြီး အပြာရောင် Activate Link ကို နှိပ်လိုက်ပါ.
Email Subscription Confirmed! လို့ အတည်ပြုပြီးတဲ့ စာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
ဒါဆိုရင် ဒီ website တွင်အသစ်ရေးသမျှကို လာကြည့်စရာမလိုပဲ Mail ထဲကိုချက်ချင်းပို့ပေးပါမည်.
လိုချင်တာ ဒီမှာ ယူကြမယ်.!
ဤပုံကိုကူးယူဖော်ပြလိုပါက Credit လုပ်ပေးပါရန်. အားလုံးကိုခင်မင်လေးစားလျက်.... ရွှေမန်းသားလေးဝေယံ(နည်းပညာ)
Myanmar Constitution Download
Wai Yan Linn
လိုင်းမကောင်း၍ ဤSiteတွင် Post များမတင်နိုင်ပါက ကျွန်တော့်သည် Facebookမှ တိုက်ရိုက် Share လုပ်ပေးပါသည်။
ရိုင်းပျစွာရေးသားခြင်းများ မပြုလုပ်ကြပါရန် အနူးအညွတ် မေတ္ကာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ အားလုံးကိုခင်မင်လေးစားလျက်... ရွှေမန်းသားလေး ဝေယံ
မြန်မာလို ဒီနေ့ ဘာနေ့လဲ???
သင့်ဖူးစာရှင် မှန်ရဲ့လား တွက်ကြည့်ရအောင်..
ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ကြဘူးလား၊ နည်းကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ။ သင်ရယ်၊ သင့်ရဲ့ ချစ်သူမွေးနေ့သက္ကရာဇ် အားလုံးပေါင်းကြည်...
အမျိုးသမီးများတွင် ထင်ရှားသောမှဲ့ (၇)မျိုး
တစ်နေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည် တစ်စုံတစ်ခုသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပြဿနာအနည်းငယ်ကြောင့် မဟာချိုင်နေ၀စ်ရှိ ကျွန်ုပ်၏အခန်းနှင့် မနီးမဝေးတွင်ရှိသော ၀ပ်ခုပ်ဟ...
ချစ်သူ(ရည်းစား)ဘ၀မှာ မကြာခဏ စကားများ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်၊ စိတ်ကောက်၊ မခေါ်မပြော၊ အဆင်မပြေဖြစ်ရလို့ စိတ်ညစ်နေရသူတွေ ဖြစ်စေ၊ လတ်တလော အချိန်မှာ အကြေ...
လူကုန်ကူးမှု အသိပညာပေး ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှု ကာကွယ်တားဆီးရေး ဗဟိုအဖွဲ့မှလွှင့်တင်
မြန်မာနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှု ကာကွယ်တားဆီးရေး ဗဟိုအဖွဲ့မှ လူကုန်ကူးမှု အသိပညာပေး ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖြစ်သည့် www.myanmarhumantrafficking.gov.mm ကို...
http:// www.myanmarcarsdb.com မြန်မာကားဈေးကွက်သတင်းနဲ့ အခြေအနေကို စုံလင်စွာ သိရမယ့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ မော်တော်ကား အရောင်းအဝယ်...
မန္တလေး နှစ် ၁၅၀ပြည့် ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်
စာအုပ်အမည် - မန္တလေး နှစ် ၁၅၀ပြည့် ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် ရေးသားသူ - လူစုံ ဒေါင်းရန်လင့် - http://minus.com/lQHGR46wVxfLb
2008 ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ စာအုပ်
ကျွန်တော်အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ စာအုပ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသားတိုင်း လက်ဝယ်မှာ ရှိထားသင့်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါ။ ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကို ရှာနေတ...
အသုံးဝင် ယတြာမှတ်စုများ(လိုရာသုံးလေ ချစ်မိတ်ဆွေ)
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာရိုးရာ ဗေဒင်ပညာရပ်မှာလာတဲ့ ယတြာနည်းတွေကို ဘာအဖွဲ့အနွဲ့မှ မပါဝင်စေဘဲ တိုက်ရိုက် ပြန်လည် ရေးသားတင်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီန...
ဆရာတော် ဦးဇောတိက၏ ဒေါသ၊သောက နည်းစေရန် နည်းလမ်းများ
လူတိုင်းစိတ်ပင်ပန်းရတာ သက်သာအောင် အကောင်းဆုံး လုပ်နည်းက တတ်နိုင်သလောက်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ နည်းပါပဲ။
Ubuntu Myanmar Guide မှစုစည်းထားသော E-Books
ကျနော်တို့အနေနဲ့ တတ်နိုင်သ၍ Ubuntu နဲ့ ပတ်သက်သော E-book တွေကို ရှာဖွေပြီး တင်ပေးသွားမှာပါ။ အခုလောလောဆယ် စုဆောင်းမိထားတာလေးကို ဖြည်းဖြည်...
၀ယ်ယူနိုင်စရာ နည်းပညာပစ္စည်းများ (80)
Adobe Software (5)
Buddha E-books (36)
Facebook နှင့်ပတ်သက်သမျှ (18)
How to download (4)
Internet Download Manager (5)
Kind Rose's Poem (1)
Law E-books (4)
Lover Poem Poetry Group. (1)
Network Tools (3)
Own create E-books (3)
Photoshop tools (4)
Recovery Tools (4)
Ubuntu OS (14)
USB Tools (3)
နည်းပညာ သတင်း (208)
ကြားဖြတ် သတင်း (30)
ဘ၀ အပိုင်းအစများ (11)
ဘ၀အတွက် အားဆေးများ (75)
မြန်မာစာ အထူးပြုများအတွက် (10)
မြန်မာနှင့် ပတ်သက်သမျှ (10)
ခေတ္တရာသူ ၏ ကဗျာများ (3)
လေ့လာစရာ Website ကောင်းများ (54)
လောကကြီးကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ နည်းပညာများ (6)
LePhone K860 Android စမတ်ဖုန်းကို Lenovo မိတ်ဆက်
OPTOMA ES529 ပရိုဂျက်တာ
ဗီဇာကတ်များ ပြည်တွင်း၌ စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြင်ဆင...
ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား ကုမ္ပဏီ ၄ ခုက ဆောင...
Jailbreak ပြုလုပ်ထားသော iDevice များ အချက်အလက် ခို...
ပါးလွှာပြီး စတိုင်ကျတဲ့ Compact Stereo System
ADSL အင်တာနက် လိုင်းများအတွက် Complaint များ ဖြေရှ...
Samsung Galaxy S Duos ကို တရားဝင်မိတ်ဆက်
Mozilla Firefox 17.0.1 Download
Ultrasurf V 11.03 Download
သူငယ်ချင်းတို့ရေ Link ချိတ်ပေးဦးနော်
Copyright © December 15,2011. ရွှေမန်းသားလေး ဝေယံ | All Right Reserved.
ရွှေမန်းသားလေးဆိုက် (1)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် 6.1.2013 တွင် ဆိုက်အပြင်အဆင် ပြင်ဆင်လိုက်ပါသည်။ ရောက်လာသူအပေါင်း စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာဖြင့် လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေ...
Contact as - Phone (+95-9) 910 42 825 , Facebook- Waiyanlinn Mdy , E-mail - shwemantarlaywaiyan@gmail.com